Umatshini wokucoca ilitye kunye nabathengisi
Oomatshini baseTshayina baseTshayina
Umatshini wokusika amatye
Stone Machine wokucoca
Umatshini Wokwenza Iitayile
Omnye uMatshini waMatye
Zenzekelayo umatshini wokucoca for Granite
Lo matshini unenqanaba elisezingeni eliphambili lamatye okusila kunye nezixhobo zokucoca, iJOBORN yayine-R & D kwaye iyenze ngokwesiseko seemveliso ezifanayo ekhaya nakwamanye amazwe. Uyilo kushishino umatshini ukukhokela intsingiselo kushishino, Ukugaya ipolishi ef ...
Zenzekelayo umatshini wokucoca Marble
Lo matshini unenqanaba elisezingeni eliphambili lamatye okusila kunye nezixhobo zokucoca, i-JOBORN yayine-R & D kwaye iyenze ngokwesiseko seemveliso ezifanayo ekhaya nakumazwe aphesheya. Uyilo lweshishini lomatshini ukukhokela imeko yolu shishino, Ukugaya kunye nokusebenza kokucoca ...
Umatshini wokugaya we-Litchi-Surface ngokuzenzekelayo
Lo matshini unenqanaba elihambele phambili lamanye amazwe lwezixhobo zokugaya ilitchi-umphezulu, i-JOBORN yayine-R & D kwaye iyenza ngokwesiseko seemveliso ezifanayo ekhaya nakumazwe aphesheya. Uyilo loshishino kumatshini ukukhokela imeko yolu shishino, Ukugaya ukusebenza kunye nokugaya ...
Manual Machine wokucoca
Lo matshini usebenzisa ikholamu ejikelezayo njengesikhokelo somgangatho wesikhokelo sokuphakamisa ngokuzenzekelayo ngokuzenzekelayo phezulu nangaphezulu. Lo matshini usebenza moya ukugaya kunye ipolishi Iizilebhu kunye ubukhulu ezahlukeneyo kakhulu, ngamatye bethuna, kunye namatye kunye noyilo. I-worktable inokukhethelwa ukugaya imisebenzi yezandla ngaphakathi ...
Ivili lokusila lalo matshini lamkela idiski yokugaya amanzi kwaye lixhotyiswe ngokudibeneyo kwenkumba. Ngokobungakanani obahlukeneyo kunye nobukhulu belitye, i-engile yasekunene emazantsi amatshe ahlukeneyo angaphantsi. Umda oqinileyo othe ngqo uyakhanya, i-angle engasekunene emazantsi ...
Injineli yobuchwephesha yobuchwephesha ezinikele ekukhokeleni
Ngokweemfuno zakho zokwenyani, khetha ezona ndlela zibonakalayo zokuyila kunye neenkqubo zokucwangcisa
UFujian Joborn Machinery Co, Ltd.
Ipaki yoovulindlela yaseHailian, Idolophu yaseShuitou, isiXeko saseNan'an, kwiPhondo laseFujian